Turkiga oo ku wareejiyay Dowlada Soomaaliya Saldhig Milatari - Jowhar somali news leader
Home NEWS Turkiga oo ku wareejiyay Dowlada Soomaaliya Saldhig Milatari
Dowladda Turkiga ayaa Sabtidii maanta ah xero milateri ku wareejiyay Dowladda Faderaalka Soomaaliya gaar ahaan milatariga sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor.
Wasaarada Gaashaandhigga Dowlada Turkiga ayaa bogga ay ku leedahay Twitterka waxaa lagu daabacay in saldhigga ciidamada lagu wareejiyay dowlada Soomaaliya ay ka mid tahay dib u habeynta ciidamada ee dalka Soomaaliya.
“Qeyb ka mid ah dib-u-habeynta Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya, Xarumihii Waqooyiga – Xarumihii 1-aad ee uu Turkigu ka dhisay Muqdisho waxaa lagu wareejiyay mas’uuliyiinta [Soomaaliya],” ayaa lagu yiri Twitter-ka Wasaaradda Difaaca Qaranka ee Turkiga.
Xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo waddanka Geeska Afrika waa mid taariikhiyan adag, wuxuuna kor u kacay kadib booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sanadkii 2011, taasoo ka dhigaysa inuu yahay hoggaamiyaha kaliya ee aan Afrikaan ahayn ee booqda Soomaaliya muddo 20 sano ah.
Iskaashiga militariga ka sokow, labada dal waxay sidoo kale iska kaashadaan caafimaadka, waxbarashada, iyo dadaallada kale.
Turkiga wuxuu dhisay iskuulo, isbitaalo iyo kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuu kaloo soomaalida siiyay deeqo waxbarasho oo ay wax ku bartaan dalka Turkiga
Previous articleTallaalka Cudurka Covid 19 oo la geeyay dalka Jabuuti
Next articlePope Francis visits Iraqi Christians, who will lead prayers for “war victims”